UBernd Leno Ibali leBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi
I-Pedro Neto Ibali lokuKhula koMntwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseJamani UBernd Leno Ibali leBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo yobomi
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso "Umbulali weNkundla". Ibali lethu leBernd Leno yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts kuletha i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yentsapho, ubomi bokuqala, indlela eya ekudumeni, ukuphakama kwigama, ubuhlobo kunye nobomi bomntu.
Ewe, wonk 'ubani uyazi ukuba uphakathi kwabagcini beenjongo ezibalaseleyo kwihlabathi. Nangona kunjalo, bambalwa abambalwa uBernd Leno's Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
UBernd Leno Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
UBernd Leno wazalwa ngo-4 Matshi 1992 kubazali bakhe; unina, uRosa Leno noyise, uViktor Leno Bietigheim-Bissingen, eJamani. Intsapho kaBernd Leno ivela kwimvelaphi yaseJamani-yaseRussia kubaba wayo, isiqingatha saseJamani, isiqingatha saseRashiya.
ULeno wakhulela nomntakwabo edolophini elincinane laseBeetigheim-Bissingen kumzantsi weJamani esondele kufuphi noStuttgart. Abo babesazi uLeno njengomntwana bambona njengenkwenkwe enamandla kakhulu. Amagunya anjalo atyathwa kwimidlalo. Ukuthetha ngemidlalo, yonke ilungu leBernnd Leno lathanda ibhola. Njengoko iLeno yayisibeka;
"Ibhola yayibaluleke kakhulu kwintsapho yam, kuba umntakwethu kunye nam kuba ubomi bethu. Sasoloko sifuna ukudlala ibhola, ukuba nebhola kufuphi nathi. Emva koko, yonke into yokudlala yayingumdlalo webhola. "
Ekuqaleni ngexesha leeholide, uLeno wayeya kudlala imidlalo yasekuhlaleni ikakhulukazi "emigodini embi" eyayingenandaba naye kuba wayenabohlobo. Ngeminyaka eyi-6, wagqiba ekubeni athabathe ibhola ngokubaluleka ngokuthatha umsebenzi.
UBernd Leno Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Ubomi bokuqala
ULeno ubhalise kwiqela lakhe leqela le-SV Germania Bietigheim elimnike isigaba sokubeka isiseko somsebenzi wakhe. Waqala ukunyusa njengomdlali ophakathi kwangoko ejoyina iqela. Ukuzimisela kukaLeno ukuba abe ngongcali kwakungeyona nje into emangalisayo. Ukuzimisela okunjalo kwamenza wazama iinzame kwizikolo ezinkulu.
Ngeminyaka eyi-11, uLeno usetyenziswe ukujoyina iqela leqela le-VfB Stuttgart kwaye wakhethwa ukuya kwiimvavanyo. Wajoyina abadlali abancinci be-200 abaye bachongwa ngokukhawuleza ukuba baye kwiimvavanyo kwiibhetts.
Ngenhlanhla, uLeno wayephakathi kwabadlali be-6 abakhethwe nguVfB Stuttgart emva kokuba baqinisekisile abaqeqeshi. ULeno usalokhu uqhubeka njengomgcini.
UBernd Leno Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Indlela eya kwigama
Waba njani uMgcini weNjongo: Njengomdlali omncinci, uLeno wenza amaninzi ekuzikhuseleni ukukhusela umgca wecala kunye nokuba ngumgcini wecala kwiimeko ezininzi. Oku wenzayo de wayeyiminyaka eyi-10 ngaphambi kokuba kukho into eyenza ukuba abe ngumgcini wegama. Ngo dliwano ndlebe Arsenal FC, ULeno wabuya wachaza. Ngamazwi akhe;
"Ngelinye ilanga umgcini wecala elivela kwiklabhu yasekhaya lakuloo ndawo akazange afike kumdlalo omnye, ngoko umqeqeshi wabuza ukuba ngubani ofuna ukuba ngumgcini wegama.
Ndathi kubo, 'Ndifuna ukuzama'. Ndazama kwaye wonke umntu wabona ukuba ndiyinto enhle kakhulu. Emva koko abazali bam bandithengela iiglavu kwaye andizange ndifune ukushiya umgomo emva koko. "
Yintoni eyenza uLeno ukuba ujonge ngakumbi isenzo sakhe sokugcina isithixo sakhe, akukho mntu omnye kunomgcini wegosa laseArsenal, uJens Lehmann.
Nangona esemncinci, uLeno wayekhokela kwiSpeyin nangaphambili yangaphambili yeCal Madrid Iker Casillas. KwakuseStuttgart uLeno kuqala wadibana noJens Lehmann owathatha ininzi yesifundo sokugcina. Ethetha ngaleyo nto, waxelela Arsenal Press;
Ndambukela ezininzi kwiiseshoni zakhe zokuqeqesha kwaye ndade ndifumana iiseshoni zokuqeqesha kunye naye xa ndandineminyaka eyi-16 okanye i-17 ubudala. Wayegxilwe kakhulu, ngokobuchule. Yiyo ingqondo oyifunayo njengomgcini wegosa.
Umgcini wegosa lomdala we-Arsenal, uLehmann usalokhu ehlala eVfB Stuttgart xa uLeno ejikeleza umsebenzi wakhe wobutsha kunye neqela. ULeno wazibonela njengomlandeli kaLehmann xa ephakanyiswa kwicala labo eliphezulu. Ngenhlanhla kubalandeli, uLeno wanquma ukwamukela idlelo elithotyayo emva kweminyaka emibini kunye nebhulathi elalibe yidlala kwiqela lesithathu laseJamani. Umsebenzi weLeno wamfumana ithikithi yaseBundesliga kunye neBayer Leverkusen.
UBernd Leno Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Ukunyuka Kwigama
Ukufuduka kwisiqendu sesithathu saseJamani kwindlela eya kwiqela lokuqala kwakuyinselele kwaye ngexesha elifanayo belinomdla kuBernd Leno owayengu 19 kuphela ngelo xesha. Kwakuyinselele ngenxa yokuba wenza iqela lakhe lenkundla ngokumelene ne-Chelsea emva kweeveki ezintathu zokujoyina iqela. Ngethuba lomdlalo, uLeno wabonisa imibukiso emangalisayo kwi-Chelsea, UDidier Drogba.
Ngodliwano-ndlebe, uLeno wakhumbula;
Emva komdlalo, Petr Wathi wayevuyile kwaye wayenomdla kum. Kwakungekho mfuneko ukuba athethe ezo zinto kodwa ndazixabisa ngokwenene. Kwakuyiminyaka esixhenxe eyadlulayo kwaye ngoku sihlangene e-Arsenal - iphosa!
Emva koMdlalo weMidlalo ye-Champions League, kwacaca ukuba uBaer Leverkusen ufumene iqhawe elitsha kumgcini wegada. Ubusazi?… Lo mdlalo weLigs League wanika uLeno umvuzo waseYurophu ngowona mncinci owake wadlala kwi-UEFA Champions League. Wayeneminyaka eyi-19 kuphela kunye neentsuku ze-193.
Emva kokuhamba kukaJens Lehmann, uLeno waba yinto eqhelekileyo kwikomiti yokuqala emva komtya wobugcisa obumangalisayo. Waqhubeka nokuhlala neBayer Leverkusen esuka kwi-2011 ukuya kwi-2018 eyenza ukubonakala kwe-233. Izinto zahamba kakuhle yonke loo minyaka de ibe enye USUKU OLUBI!!
Ingcinezelo eya kuYe: Wonke umntu wayesazi ukuba uLeno abe nenkalipho enkulu - izicaka zalo. Kodwa akukho mntu wayesazi ukuba kwenzekani kuye ngeli suku elibi kakhulu ngo-Oktobha 2015 xa wenza i-Bundesliga engathandekiyo yokulondoloza injongo yonyaka. Kwimidlalo yaseBundesliga Augsburg, I-Leno yaveliswa ukuba ihluthe i-back back-looking back-from UJonatan Tah emva komnatha wakhe. Jonga ividiyo ngezantsi;
Ethetha ngokutshatyalaliswa emva kokuhlaselwa ngamagama abalandeli, uLeno uthe;
"NjengeGoli, unguye yedwa. Uqeqesha ngokwahlukileyo, ufudumala ngokwahlukileyo. Ulwa nendawo enye kwaye ke xa wenza enye impazamo enkulu, ukhawuleza u-idiot. "
Ngeli xesha, kwacaca umhla wokugqibela kaLeno kunye neqela lakhe elithandwayo laseJamani laliza kuza. Konke akwenzileyo kwakukulinda ithuba lokuhamba. Ngenhlanhla, ngomhla we-19 kaJuni, i-2018, iqela leNgesi indlu yezixhobo zemfazwe fumana zakhe iinkonzo. Oku kwanika uLeno ithuba lokuhlangabezana nomhlobo wakhe omdala uPetr Čech.
Njengoko i-destin yayiyakuba nayo, uLeno waba ngumgcini wegoli oya kuphumelela omnye weArsenal. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
UBernd Leno Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Ulwalamano lobomi
UBernd Leno uye wahlala noSophie Christin ukususela ngo-Agasti 15 2015, eyenzekayo umhla wokugubha umkhosi wabo.
U-Sophie ongumzalwane waseJamani kunye neCzech wazalwa ngosuku lwe-17th kaFebruwari 1997 (I-5 iminyaka encinane kunendoda yakhe) eDusseldorf, eJamani. Ungumfundi wolengiso ochitha ixesha elithile. Bobabini abathandayo baye babonwa kwiindawo ezininzi ezingenakuqhayisa.
Nangona bekunye ixesha elide, abathandi bebabini abathandanga abazange balathise naziphi na izicwangciso zomtshato wabo. Nangona kunjalo, kungumcimbi wexesha ngaphambi kokuba izithandane zomtshato zenzele zombini.
UBernd Leno Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Ubomi bomntu
Ukukwazi ubomi bomntu kaBernd Leno ngaphandle kokugcinwa kweinjongo kunokukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo ngaye.
Ukuqala, ungumRoma Katolika ngokholo. ULeno uye wakwenza imizamo yokutyelela iSt. Peter's Basilica, iVatican eRoma ukuba abe nento athi "ixesha elikhethekileyo" kunye noPapa Francis.
Iqela leMidlalo leFIFA eliyinyani: Ngethuba asebenza nabo baseArsenal Hector Bellerin kwaye Rob Ukubamba udlala umdlalo webhalobhayi; I-Call of Duty, uBernd Leno nje juan Foyth ngathanda ukunamathela neFIFA.
Inhlonipho kaLeno yeCasillas ibonakaliswe ekukhethweni kweqela lakhe kumdlalo wezemidlalo weFIFA. Ethetha ngaleyo nto, wambi wathi ...
"Ndandisoloko ndisebenzisa ukudlala njenge-Real Madrid kwi-PlayStation" uthe. "ICasillas yayiyisizathu esikhulu sokuba".
UBernd Leno Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Imisebenzi engaziwayo
Indlela Aye Yayidlala Ngayo Igama LeNqampu- "Umbulali weNkundla ": Nangona ULeno wafunda okuninzi kuJens Lehmann kunye Iker Casillas, kodwa ngokuqinisekileyo wayekwazi ukufundisa abanye abagcini benjongo ethile. Leyo isenzo "sokugcina izigwebo" ezamnika isithandwa sakhe.
Ubusazi?… I yangaphambili tI-Leverkusen iiglovu elaliyeke ukukhwabanisa yamisa izigwebo ezintlanu kwii-8 eziseBundesliga kwindawo yokukhahlela kwi-2013 / 14. Ngokuqinisekileyo walondoloza ezine kumqolo. Njengoko ngexesha lokubhalwa, akukho mgcini-mgama ophilayo (omabini osebenzayo kunye nomhlala-phantsi) utshitshise irekhodi yehlabathi.
Ukunyamezela: ULeno unokunyamezela ngokungafani nanjengomgcini wegosa lomhla wamhla. Ngesinye isikhathi wagcina isithuba sikhuselekile ngeempumlo ephukile kwaye akaze akwesaba ukuhlawulisa abachasi bakhe ngenjongo yokuthatha ibhola kubo.
Oku kwenzeka kwi-Champions League yokugqibela umdlalo we-16 Diego SimeoneAtletico Madrid.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda iBurnd Leno yabantwana bebali kunye ne-Untold Biography Facts. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
Umhla oLungisiweyo: nge-10 kaSeptemba ngo-2020
I-Serge Gnabry yabantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: Agasti 27, 2020